Yoma Central စီမံကိန်း နိုဝင်ဘာလထုတ် စာစောင်
Progress & Development
Estates & Projects
Pun Hlaing Estate
The Hills @ Pun Hlaing
Lotus Garden Project
ချစ်ခင်ရပါသော မိတ်ဆွေများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့ မိတ်ဖက်များခင်ဗျာ။
ဒီလထဲမှာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ သတင်းကောင်းတွေ အများကြီးကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးသတင်းကောင်းအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Yoma Central ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ဟာ ယခုလက်ရှိမှာဆိုရင် အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သေသေချာချာလိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည် လည်ပတ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အားလုံးကို ဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်းပေးချင်ပါတယ်။ အစိုးရမှ ရန်ကုန်မြို့အတွက် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မိမိအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ရမည့် ထုတ်ပြန်ချက်အရ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၄ ရက်မှ စတင်၍ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၂ ရက်အထိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အားလုံးကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားစေခဲ့ပြီး ၄င်းကာလအတွင်း ကျွန်တော်တို့၏ အဖွဲ့များသည် လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပတာဝန်များကိုသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကန်ထရိုက်တာများနှင့်လည်း နီးကပ်စွာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမှုတွင် သေချာစွာအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မလိုလားသော သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ နောက်ဆုံးတိုးတတ်မှုအခြေအနေများတွင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီမံကိန်းက Property Guru Asia Myanmar Property Awards ရဲ့ ကဏ္ဍ ၃ခုမှာ စကာတင်စိစစ်ရွေးချယ်ခံရကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်း ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုချီးမြှင့်တဲ့ လူကြီးမင်းများက ကျွန်တော်တို့ကို အသိမှတ်ပြုပေးတာကြောင့် အလွန် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Yoma Central ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတွက် နောက်ထပ်ခြေလှမ်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ IFC မှ EDGE Certificate ရရှိရန် ကျွန်တော်တို့၏ စီမံကိန်းကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေသော Assistant Compliance and Approval/Social Manager - Alexander Kyaw Thiha Hla Myint ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
အခြားသိရှိလိုသည့် မေးခွန်းများ၊ မှတ်ချက်များရှိပါက ကျွန်တော်တို့အား အချိန်မရွေးဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Yoma Central Team
တာဝါ၂ အတွက် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားများနှင့်အတူ ကန်ထရိုက်တာများသည် နေရာချမှတ်ရေးများ အတူတကွ လုပ်ကိုင်နေပြီးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းခွင်သုံး drawing များကိုစတင်ရေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကန်ထရိုက်တာများသည် Gas Insulated Switchgear (GIS) များကိုလည်း လုပ်ငန်းခွင်တွင် အောင်မြင်စွာပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ခေတ်မှီ GIS စနစ်သည် ကျွန်တော်တို့အား ဓာတ်ငွေ့အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းများ၏ အန္တရာယ်လုံခြုံမှုကို တိုးမြှင့်စေရုံသာမက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပြီး စီမံကိန်း၏အကျိုးစီပွားရေရှည်တည်တံ့မှုကို တိုးတက်စေပါသည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့သည် လုံခြုံစိတ်ချရသော ဓာတ်ငွေ့ထောက်ပံ့မှုကို မရရှိနိင်သေးတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် နောက်ဖွင့်မည့် F&B ဆိုင်များတွင် လောင်စာဆီသုံးဓာတ်ငွေ့ Liquified Petroleum Gas (LPG) ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်မှုကို ယခုလတွင်စတင်တပ်ဆင်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
လုပ်းငန်းခွင်၌ လိုအပ်သော သတ္တုကုန်ကြမ်းများဖြစ်တဲ့ facade materials (မျက်နှာစာပစည်း) များကို တာဝါ (၁) ၏ (၁၁) လွှာ၊ တာဝါ (၂) ၏ (၁၀) လွှာ နှင့် တာဝါ (၄) ၏ (၈) လွှာ အထိ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် ဝယ်ယူပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တာဝါ (၁) ၏ (၁၉) လွှာ ၊ တာဝါ (၂) ၏ (၂၂) လွှာ၊ တာဝါ (၃) ၏ (၉) လွှာ၊ နှင့် တာဝါ (၄) ၏ (၁၄) လွှာ ဆက်လက်ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်လည်း လိုအပ်သောအခြား သတ္တုကုန်ကြမ်းများကို ဝယ်ယူပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Bird-eye view on the project site
တာဝါ (၁) - The Peninsula Residences Yangon
တာဝါ (၁) အဆောက်အဦ၏ (၁၇) လွှာတွင် ကျောက်ပြားတပ်ဆင်ခြင်းများ စတင်ဆောက်လုပ် နေပြီဖြစ်သည်။ ၆လွှာ၏မျက်နှာစာတွင် unitized wall panel (UWP) များ ကိုလည်းတပ်ဆင်ပြီး UWP ကို (၇) လွှာတွင် အစပြုလုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင် ၈လွှာ၌ အုတ်စီခြင်းလုပ်ငန်း များပြုလုပ်နေသည်။
တာဝါ (၂) - Westin Hotel
ဟိုတယ်၏ (၁၂) လွှာ တွင်ရှိသောကျောက်ပြားတပ်ဆင်ခြင်း ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက် (၁၃) လွှာတွင် စတင်တပ်ဆင်နေပြီဖြစ်သည်။ မြေအောက်လွှာနှင့် (၂) လွှာရှိ အုတ်စီခြင်းလုပ်ငန်းများကို ယခုလက်ရှိတွင် လုပ်ဆောင်နေသည်။
Office Tower3and Westin Tower2view from L8
တာဝါ ၃/၄ - ရုံးများ
တာဝါ (၃) ၏ (၆) လွှာနှင့် တာဝါ (၄) ၏ (၈) လွှာတွင် ကျောက်ပြားတပ်ဆင်ခြင်း စတင်ဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။
St. Gabriel ဘုရားကျောင်း
YCP လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ကပ်လျက်ရှိသော ဘုရားကျောင်းအကြားရှိ နယ်နိမိတ်နံရံနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများ ပြေလည်စွာ ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နယ်နိမိတ်နှစ်ခုကြား ခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးနေရာ ချဲ့ထွင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုနောက်ဆုံးတိုးတတ်မှုအခြေအနေအရ ခြံစည်းရိုးနံရံဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ၎င်း၏နေရာ အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးတည်ဆောက်ပုံများအပေါ် မူတည်၍ လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိနေသည့် အလုပ်အားလုံးကို ယခုယာယီဆိုင်းငံ့ထားလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yoma Centralစီမံကိန်းက Property Guru Asia Myanmar Property Awards ရဲ့ ကဏ္ဍ ၃ခုမှာ စကာတင်စိစစ်ရွေးချယ်ခံရကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်း ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ၄င်းတို့မှာ Best Mixed-Use Development, Best Retail Development နှင့် Best Office Development တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် The Property Guru Asia Property Awards ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားသည် သက်ဆိုင်ရာဒေသများတွင် ဦးဆောင်နေသော အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွေကိုသာ ရွေးချယ်လေ့ရှိတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
YCP ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုခရီး
Yoma Central သည် ရန်ကုန်မြို့တွင်ထားရှိထားသော အနာဂါတ်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာအမြင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ အိမ်နီးချင်းဒေသများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး နောင်လာမည့် မျိုးဆက်များအတွက် ဤထင်ရှားသော မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန် ရေရှည်တည်တံ့သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ရှေ့ဆောင်ဦးတည်လျက်ရှိပါသည်။ကျွန်တော်တို့သည် အစိုးရမှ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း (EIA) ကို အပြည့်အဝရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုက်နာမှုရှိမှုလက်မှတ် (ECC) ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် စံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် IFC ၏ EDGE (သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဒီဇိုင်းတွင်ထူးချွန်မှု) မူဝါဒများကိုကျင့်သုံးနေပါ သည်။
ဤအရာကိုသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့သည် ဒေသတွင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ ဤပြောင်းလဲမှု ကိုအမှန်တကယ် ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့၏ အရည်အသွေးများကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပ် မတ်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EDGE အဖွဲ့မှာ တိုးတက်ကြီးထွားလျက် ရှိပါသည်။ Assistant Compliance and Approval/Social Manager အလက်ဇန်းဒါး ကျော်သီဟလှမြင့်သည် EDGE ကျွမ်းကျင်သူများသင်တန်းကို အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီး လက်ရှိနောက်ဆုံးစာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ ရာသီဥတုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းကျိုးများရှိသည့် Green Building များနှင့် ပတ်သတ်၍ ရရှိထားသောဗဟုသုတအသစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်သော ဒီဇိုင်းအလေ့အကျင့်များနှင့် EDGE အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် EDGE အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုနားလည် သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့် Yoma Central ကို အမှန်တကယ်ရေရှည်တည်တံ့သော စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် ဖြစ်သည်။
အလက်ဇန်းဒါး ၏ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုကို ယခုလထုတ် Yoma Central Profiles မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
EDGE ဆိုတာ ဘာလဲ။
EDGE သည် IFC မှ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဖော်ဆောင်ထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြု Green Buildings တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များက စီမံကိန်းများရှိ သုံးစွဲသူများအား တန်ဖိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်မှု အားသာချက် ကို ရရှိစေသည်။ EDGE သည်ရာသီဥတု၊ ကုန်ကျစရိတ်အချက်အလက်များ၊ စားသုံးမှုပုံစံများနှင့် အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်များကို ခန့်မှန်းရန် algorithmများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသည့် အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များကို သေချာအောင်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော EDGE ကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ကျော်တွင် လက်ခံကျင့်သုံးလျက် ရှိပြီး မကြာမီတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့စံနှုန်း ဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
Yoma Central Profiles - အလက်ဇန်းဒါးကျော်သီဟလှမြင့်
အလက်ဇန်းဒါးကျော်သီဟလှမြင့်သည် Yoma Central စီမံကိန်း၏ Assistant Compliance and Approval/Social Manager တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူသည် စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ယူထားပါသည်။ Yoma Central အဖွဲ့သို့ မ၀င်ခင်အလက်ဇန်းဒါးသည် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့နယ်ပယ်ရှိ Fortune 500 ကုမ္ပဏီများတွင် ငါးနှစ်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် (HSE) နယ်ပယ်တွင် အထူးသဖြင့် HSE ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်း၊ အကျပ်အတည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အန္တရာယ်ရှိသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းတို့တွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။
အလက်ဇန်းဒါးသည် သူ၏သမိုင်းကြောင်းတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းများစွာကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သူများကို ချိတ်ဆတ်ခြင်း ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို တာ၀န်ယူခဲ့သည်။
အလက်ဇန်းဒါးသည် Universityititi Teknologi PETRONAS မှ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ)၊ ပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် NEBOSH၏ အလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအထွေထွေအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုလည်း ရရှိထားပြီး ယူကေအလုပ်အကိုင်လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဌာန (IOSH) ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသင်းဝင်လည်းဖြစ်သည်။ အဲလက်စ်သည် သူ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာအရည်အချင်းများအပြင် Northampton တက္ကသိုလ်မှ MBA ဘွဲ့ရရှိထားသူလည်းဖြစ်သည်။
Serge Pun & Associates (SPA) နှင့် Yoma Central Projectတို့တွင် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပေးလို့ရလား။
Yoma နှင့် SPAသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းကော်ပိုရေးရှင်းအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အိမ်ခြံမြေနယ်ပယ်တွင် ပြောစမှတ်တွင်သောကြောင့် ကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၀ အလယ်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် SPA & Yoma မိသားစုတွင် လုပ်ငန်းများပါ၀င်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အဖွဲ့ထဲမ၀င်ခင် ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိုင်ရာ နောက်ခံမှလာခဲ့တာကြောင့် ဒီမှာ ၀င်နိုင်၊မနိုင်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာက၊ ပထမနေ့မှစပြီး ကျွန်တော့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် သူဌေးက နွေးထွေးစွာကြိုဆိုမှုနှင့် ထောက်ခံမှုကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ဘယ်လိုတိုးတက်လာပါသလဲ။
ဤအဖွဲ့အစည်းကြီးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထင်ရှားဆုံးသောအရာများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၀န်ထမ်းတွေကို ၄င်းတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို တက်လှမ်းဖို့ အားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့အနေဖြင့် Yoma Centralမှာ စတင်လုပ်ကိုင်ပြီး ဒီတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတောင် ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကို သတ်မှတ်ရာမှာ အထောက်အပံ့တွေရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Yoma Centralဟာ IFCရဲ့ ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးဒီဇိုင်း (EDGE) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရယူဖို့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် EDGE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျွန်တော် နားလည်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကလည်း ကျွန်တော့ရဲ့ EDGE လေ့ကျင့်ရေးအတွက် တောင်းဆိုမှုများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပြီးဖြစ်ပြီး၊ EDGE Expert Examကို ဒီဇင်ဘာလလယ်မှာ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုဖို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြေဆိုဖို့ လိုအပ်တဲ့ EDGE Expert သင်တန်းကို မကြာသေးမီက ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ ကျွန်တော့အနေနဲ့ International Finance Corporation (IFC)နှင့် သြစတေးလျနှင့် ယူကေ အစိုးရတို့က ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ Myanmar Environmental Assessment Association တို့ ပူးပေါင်း စီစဉ်ကျင်းပတဲ့ လူမှုအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကိုလည်း တက်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သင့်သူဌေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
ကျွန်တော်က Yoma Central Project ၏ စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ Iain Fairbairn ကို အစီရင်ခံစာတင်ရပါတယ်။ Iain က ထောက်ခံအားပေးတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမြဲတန်ဖိုးထားတတ်ပြီး၊ ရည်မှန်းချက်အသစ်များသို့ရောက်ရှိဖို့ မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးရန် အမြဲအားပေးပါတယ်။
သင်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်အရ YCPရဲ့ ဒေသခံလူထုအပေါ်သက်ရောက်မှုက ဘာြဖစ်မလဲ။
Mixed-use ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ Yoma Central ဟာ အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုးကလူတွေအတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအပေါ် များစွာအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးကာလမှာတောင် ဒီစီမံကိန်းက နယ်ပယ်သီးသီးမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၃၀၀၀ကျော်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ထောင်နှင့်ချီတဲ့ မိသားစုတွေအတွက်အသက်သွေးကြော ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အပြင် YPCက အလုပ်သမားတွေကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးပြီး သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်အလားအလာကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ စီမံကိန်းစတင်လည်ပတ်တာနဲ့တပြိုင်နက် ဒီစီမံကိန်းဟာ ရန်ကုန်ရဲ့ အထင်ကရလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။
သင်ယခုအချိန်အထိ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုက ဘာြဖစ်မလဲ။
ကျွန်တော့်အတွက် Yoma Centralကို ၀င်ရောက်တာဟာ ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းကနေ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကို ပြောင်းသွားတာပါပဲ။ ဒီနယ်ပယ်နှစ်ခုက ထူးခြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ အလေ့အထတွေရှိလို့ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Yoma Central က ဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်တွေသာမက ကျွန်တော် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးသက်ရောက်မှုတွေကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာပါ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်တွေနှင့် စံချိန်စံညွှန်းတွေကို လက်ခံကျင့်သုံးထားပါတယ်။ ဒေသတွင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အချို့ကို ရှေ့ဆောင်လုပ်ကိုင်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရတာ ကျွန်တော်၀မ်းသာပါတယ်။
Build Well to Live Well: Wellness Lifestyle Real Estate and Communities
Solar: The Future of Power Resilience
How COVID-19 and the climate are transforming the real estate sector
© 2020 by Yoma Land. All rights reserved. Tel: (951) 368 7766